गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ६/७ महिनाभित्रै परीक्षण उडान : प्रवेश अधिकारी, आयोजना प्रमुख
नेपाल लाइभ | २०७५ पौष १३ शुक्रबार | Friday, December 28, 2018 ०७:३०:०० मा प्रकाशित
भैरहवामा निर्माणधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले तीव्रता लिएको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले अहिले धावनमार्ग पिचको काम थालनी गरिसकेको छ। निर्माण कार्यले अन्तिम चरण प्रवेश गरेसँगै कहिलेबाट उडान सुचारु गर्ने भने चर्चा पनि सुरु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थल सन् २०१९ भित्रै सञ्चालनमा आउने बताउँदै आइरहेका बेला निर्माण प्रगति, समस्या र मुआब्जा लगायतका विषयमा विमानस्थल स्तरोन्नति आयोजनका प्रमुख प्रवेश अधिकारीसँग नेपाल लाइभका प्रदेश ५ संयोजक दीपक घिमिरेले गरेको कुराकानी:
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने अवस्था बनेको हो?
निर्माणका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समय सन् २०१९ जुन २८ हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको विमानस्थल निर्माणले अहिले निकै गति लिएको छ।अहिलेसम्म चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरिसकेको छ। बाँकी ४० प्रतिशत काममा पनि विदशेबाट सामान आयात गरेर जडान गर्ने कामको हिस्सा २० प्रतिशत हो। यसमा ठेकेदारले लाइटिङ र टर्मिनल भवनमा आवश्यक पर्ने उपकरण जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कामलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम भइरहेको छ। ठेकेदार कम्पनीको प्रगतिलाई हेर्दा विमानस्थल निर्माणको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा हामी आशावादी छौं।
धावनमार्ग पिचको कामचाहिँ कहिलेसम्म सकिन्छ?
धावनमार्गमा पिचको काम सुरु भइसकेको छ। पिच ४ तहमा गरिन्छ। अहिले ठेकेदार कम्पनीले पहिलो तहको काम गरिरहेको छ। एउटा तहको पिच सम्पन्न गर्न पनि १५ देखि १८ दिन लाग्छ। अन्य तहको पिचमा भन्दा पहिलो तहको पिच गर्न केही गाह्रो हुने रहेछ।
पहिलो तहको पिच मात्रै ७ दशमलव ५ सेन्टिमिटर मोटाइमा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो तहको ३ मध्ये २ भागमा कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ। त्यसमा पनि धानवमार्गको पिचभन्दा पहिले गर्नुपर्ने प्राइम कोट छर्ने काम ९० प्रतिशत सकियो।
ठेकेदार कम्पनीले पनि तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको छ। निर्माणमा अहिले दैनिक ४ सयभन्दा बढी कामदार परिचालित छन्। यही गतिमा काम अगाडि बढाउन सके अबको ६/७ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको परीक्षण हुन्छ।
ट्याक्सीवे वेको सब–बेस लेभलसम्मको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। नयाँ बन्दै गरेको धावनमार्ग र हाल सञ्चालनमा रहेको धावनमार्ग जोड्ने बाटोको काम पनि जारी छ। दोस्रो तहको पिच अगावै ट्क्यासी वेमा समेत पिच सुरु हुने अवस्था छ। जहाज पार्किङ एरियाको काम पनि सकिइसकेको छ।
टर्मिनल भवन निर्माणको अवस्था कहाँ पुग्यो?
आगमन कक्ष रहने भवनको भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी सबै काम सकिएका छन्। भवन निर्माणका फिनिसिङ भइरहेको छ। यस्तै, प्रस्थान कक्ष रहने टर्मिनल भवन निर्माणको काम पनि तीव्र छ। यस अन्तर्गत अन्तिम ढलानको काम भने बाँकी छ। त्यो एक सातामै सम्पन्न हुन्छ। निर्माणको गति हेर्दा अबको ४ महिनाभित्र टर्मिनल भवनले पनि पूर्णता पाउनेछ।
उडान तथा अवतरणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने कन्ट्रोल टावर तथा प्रशासनिक भवन निर्माण के हुँदै छ?
कन्ट्रोल टावर ८ तलाको भवन हो। ७ तलासम्मको काम सकियो। कन्ट्रोल टावरको भवन दुई महिनाभित्र पूर्ण हुन्छ। प्रसाशनिक भवन भने निर्माण भइसकेको छ।
तपाईंले भने अनुसारकै समयमा विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न भएको अवस्थामा उडानचाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्न सकिन्छ?
कच्चा पदार्थको अभावका कारण विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिले पनि धावनमार्ग पीचका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ झन्डै ९० प्रतिशत स्टक छ। गिट्टी बालुवाको पनि समस्या छैन।
निर्माणले लय समातेको बताउँदै गर्दा तपाईंहरुले झेलनुपरेको समस्या पनि त होला...
विमानस्थल निर्माणमा अहिले स्थानीय करका कारण आवश्यक माटोमा समस्या आउने हो कि भने प्रश्न उब्जेको छ। अहिले दैनिक एक सय ५० देखि २ सय टिप माटो आइरहेको छ। पुरानो सम्झौता अनुसार आइरहेको माटोले मात्रै विमानस्थल निार्माणमा आवश्यक माटो पुग्ने अवस्था छैन। यसका लागि स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र प्राधिकरण महानिर्देशक सञ्जीव गौतमसँग पनि छलफल भइरहेको छ। स्थानीय करका कारण माटोमा बढी मूल्य पर्ने अवस्था भए पनि समयमै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले माटोको रेट बढी छ। स्थानीय तहमा माटो ल्याउँदा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सम्झौता गर्नुपर्नेछ। जसका लागि अब ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ स्थानीय कर र वातावरण करका नाममा छुट्याउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। वातावरण कर छुट नभए पनि स्थानीय कर मिनाहा गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेकाले करमा पुनर्विचार हुन सक्ला।
माटोबाहेक विमानस्थल निर्माणमा आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव त छैन?
कच्चा पदार्थको अभावका कारण विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिले पनि धावनमार्ग पीचका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ झन्डै ९० प्रतिशत स्टक छ। गिट्टी बालुवाको पनि समस्या छैन। विमास्थलका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतको व्यस्थापनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, भैरहवा वितरण केन्द्र, ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाका बीचमा छलफल भइरहेको छ। विमानस्थललाई आवश्यक विद्युतका लागि डेडिकेटेड लाइन २ महिनाभित्र आइपुग्नेछ। अहिले पोल सार्ने र पोल तान्ने काम धमाधम रुपमा भइरहेको छ।
मुआब्जा वितरणको काम कहाँ पुग्यो? कहिलेसम्म पाउँछन् स्थानीय पीडितले?
मुआब्जाको लागि २३ अर्ब रुपैयाँ बाँड्नुपर्ने हो। त्यसमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ बाँड्न बाँकी छ। अहिले त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइरहेको छ। नपुग रकमबारे सम्बन्धित निकायमा फाइल पठाइसकेका छौं।